The Gardener: 2012-11-11
ဒက်ဘဲလ်အိုဆဲဗန်းကို ကြိုက်တယ်။ မာတီးနီကို လှုပ်ခါ၊မမွှေနဲ့နော် လို့မှာတတ်တဲ့ ဂျိမ်းစ်ဘွန်း။ လိုင်ဆန့်စ်တူကေးလ် ဆိုတဲ့ သတ်ခွင့်ရလက်မှတ်နဲ့ အင်ဂလန်က လူသတ်သမားပေါ့။ ငယ်တုန်းကလည်း ဒီဇာတ်ကားတွေနဲ့ပဲ ကြီးပြင်းလာတာ။ ရှေ့ပိုင်းတွေထဲမှာတော့ ရှောင်ကွန်နရီနဲ့ ရော်ဂျာမိုးကိုကြိုက်ခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်း ပီရာ့စ်ဘရော့စ်နန်ကြိုက်တယ်။ သေနတ်တစ်လက်က လက်တစ်လက်က တစ်လက်ကိုပြောင်းသွားတယ်။ အထူးအဆန်းလက်နက်တွေပါတယ်။ ကားပြိုင်မောင်းတာပါတယ်။ ကောင်မလေးချောချောလေးတွေပါတယ်။ နောက်တော့ ထူးခြားဆန်းကြယ်တဲ့ စာတန်းထိုးခန်းတွေပါတယ်။ (ဟမ်)။
Skyfall ကို ကြည့်ဖို့အတွက် သေချာပြင်ဆင်ထားခဲ့တယ်။ စတားဟဘ်က ပွိုင့်တွေနဲ့ လက်မှတ် လေးစောင်ထုတ်ထားတယ်။ စောင့်နေရင်း သုံးပတ်ထဲသာရောက်လာတယ်။ လက်မှတ်တွေရောက်မလာဘူး။ စတားဟဘ်က ဟဲ့ပ်ဒါ့စ်ခ်တွေတောင်မှ ဖုန်းခေါ်ရလွန်းလို့ အတော်ရင်းနှီးနေပြီ။ ဒါနဲ့ပဲသွားမကြည့်ဖြစ်တာ အတော်ကြာသွားတယ်။
မနေ့မနက်က နိုးလာတော့ ခေါင်းက မဟားတရားကိုက်နေတယ်။ အိပ်ရေးအဝလွန်တယ်ထင်တယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင် ၁၂ နာရီ နောက်ပိုင်းမှ အိပ်တယ်။ စောစောအိပ်လိုက်တာနဲ့ ခေါင်းက မခံနိုင်ဘူး။ တစ်နေ့လုံးကို တစစ်စစ်ကိုက်တယ်။ ခွင့်ယူရမှပျင်းတာနဲ့ ရုံးကိုပဲ သွားလိုက်တယ်။ ညဘက်မှာ လူကြုံပစ္စည်းသွားပေးရင်းနဲ့ Bugis ရောက်သွားတယ်။ အဲဒါနဲ့ပဲ ည ၉ နာရီ ခွဲကားကို ဝင်ကြည့်ဖို့လုပ်တယ်။ Nets နဲ့ပေးတဲ့ဘက်မှာ တန်းစီရင်း ကောင်တာမှာ ဝန်ထမ်းမရှိတာနဲ့ cash နဲ့ လက်မှတ်ဝယ်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်။ နောက်မှာ တန်းစီနေတဲ့ဆယ်ယောက်လောက်ကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဒီကောင်တာက လက်မှတ်ရောင်းသလားဆိုပြီး မေးလိုက်တယ်။ လူပါးဝသလိုဖြစ်သွားတယ်ထင်တယ်။ လက်မှတ်ဝယ်ပြီးမှ ငွေသား ၂၂ ကျပ်မရှိဘူးဆိုတာ သတိရတယ်။ ပိုက်ဆံဆင်းထုတ်လိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီး ပြောခဲ့ပြီး အိတ်နှစ်လုံးကို မွှေနှောက်ရှာတော့ ၂၂ ကျပ်အတိထွက်လာတယ်။ (အရင်ရှေးရှေးဘဝက ပစ္စေကဗုဒ္ဓါကို ရုပ်ရှင်လက်မှတ် လှူဖူးတဲ့ အကျိုးဖြစ်မယ်။) စားစရာဝယ်ဖို့တော့ ပိုက်ဆံမရှိတော့တာနဲ့၊ မစားတော့ဘူးဆိုပြီး ရုံထဲဝင်လိုက်တယ်။
Shaw မှာတစ်ခါမှမကြည့်ဖူးဘူး။ ဒါပထမဆုံးအကြိမ်ပဲ။ ခုံတွေက သိပ်မကောင်းလှဘူး။ နည်းနည်းကွယ်တယ်လို့ထင်တယ်။ ကောင်းတာကတော့ လူနည်းတာပဲ။ မကောင်းတာနောက်တစ်ခုက လူနည်းလွန်းတော့ အဲကွန်းက ရေခဲတိုက်လို အေးနေတာပဲ။ (ရောက်တော့မရောက်ဘူးသေးဘူး။ ခန့်မှန်းကြည့်တာ။) စင်ကာပူမှာ အနွေးထည်ဝတ်ဖို့လိုတာ ဒီတစ်နေရာလည်း ပါလောက်မယ်ထင်တယ်။
အသံစနစ်ကတော့ မဆိုးဘူး။ အဆင်ပြေတယ်။ ရုံးကပြန်လာတော့ လက်ရှည်နဲ့ ဘောင်းဘီရှည်ဆိုတော့ ကျနော့်မှာ အဆင်ပြေတယ်။ မိန်းမကတော့ တချိန်လုံးချမ်းနေတာနဲ့ ရုပ်ရှင်တောင်မကြည့်လိုက်ရဘူးထင်တယ်။ အရင်လည်း ရုပ်ရှင်ရုံမှာ အိပ်ပျော်ပျော်သွားတတ်တယ်။ ပရင်ဆက်အော့ဖ်ပါရှားမှာဆိုလည်း အိပ်ပျော်သွားတယ်။ ကာတွန်းကားကလွဲရင် ဘာကားမှ ဆုံးအောင်မကြည့်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်။ တကယ်က သူ ဒီကားကို မကြည့်ချင်ဘူး။ ဒန်နီယယ်ခရိတ်ခ်ကို လူဆိုးနဲ့တူတယ်လို့ သူထင်တယ်။ မျက်လုံးအပြာလေးနဲ့ ချောရှာပါတယ်ဆိုလည်း မရဘူး။ ယောကျာ်းစိတ်ချမ်းသာအောင် အတူလိုက်လာတဲ့သဘောလောက်ပဲ။
ရုပ်ရှင်က အဖွင့်ကတော့ သုညသုညခွန်တို့ ထုံးစံအတိုင်း လိုက်တယ်ပြေးတယ်က စတာပဲ။ ဒီတစ်ခါကတော့ သိပ်အရေးကြီးတယ်။ M တို့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ အေးဂျင့်တွေရဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေပါတဲ့ မာသောအချပ်ပြား(ဟာ့ဒ်ဒစ်ခ်)ကို လူတစ်ယောက်ခိုးသွားတယ်။ အဲဒီလူက အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကဆိုတော့ မဖြစ်ချေဘူး။ ပါသွားလို့ဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူး။ M ကလည်း အင်္ဂလန်က အင်မတန်ရိုင်းတဲ့ အင်္ဂလိပ်မကြီး။ ဘလက်ဒ်ဒီ မပါရင် စကားမပြောဘူး။ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေ ရိုင်းတာကို M ရဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကတစ်ဆင့်လေ့လာနိုင်တယ်။ မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ သေနာကောင်လေး၊ လိုက်ဖမ်းပါတော့လား။ မလွတ်စေနဲ့ ကုလားမရဲ့။ စသဖြင့်တွေပြောဆိုနေတယ်လို့ အကြမ်းဖျင်းနားလည်ထားလို့ရပါတယ်။
လူဆိုးကလည်း အင်မတန်တော်တယ်။ လူမည်းမင်းသမီးလေးနဲ့ သုညသုညခွန်တို့က ဂျစ်ကားတစ်စီးနဲ့လိုက်တယ်။ လူဆိုးက အော်ဒီနဲ့ပြေးတယ်။ မိန်းမကတော့ ကွန်ပလိန်းလုပ်တယ်။ လူဆိုးတစ်ယောက်ဖမ်းတာနဲ့ ကျန်တဲ့လူတွေ အကုန်သေကုန်တော့မှာပဲ၊ စသဖြင့်တွေ မြည်တွန်တောက်တီးတယ်။ မ်ိန်းမရယ်၊ ဒီလိုမတွေးပါနဲ့ကွာ။ လူဆိုးကို အမိဖမ်းဖို့လိုတယ်လို့ပဲတွေးစမ်းပါဆိုပြီး ဆက်ကြည့်ရတယ်။
လူဆိုးကစက်သေနတ်နဲ့ပစ်တယ်။ အင်မတန်တော်တဲ့လူဆိုး။ ဆိုင်ကယ်နဲ့ခေါင်မိုးတွေပေါ်က ပြေးတာလိုက်တာ အင်မတန်မှ အသက်ဝင်တယ်။ ခေါင်မိုးတွေအပေါ်မှာ ဆိုင်ကယ်မောင်းဖို့ လမ်းကလေးတွေပါတာ အခုမှသိရတယ်။ ဘလက်ဒ်ဒီ M က ဘလက်ဒ်ဒီ လူဆိုးနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့ ဘလက်ဒ်ဒီ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းကို ဘလက်ဒ်ဒီ အင်စထရက်ရှင်းစ်တွေပေးတယ်။ ဘလက်ဒ်ဒီ လူမည်းမလေးက ဘလက်ဒ်ဒီကားရဲ့ ကွဲနေတဲ့ ဘလက်ဒ်ဒီလေကာမှန်ကို ဘလက်ဒ်ဒီ လက်နဲ့ရိုက်ပြီးဖယ်လိုက်တယ်။ ကားမှန်က ကျည်ထိပြီးကွဲနေတော့ မြင်ကွင်းကို ဘလက်ဒ်ဒီ ကွယ်နေတယ်။ ဘလူးတုသ်ခေါ်တဲ့သွားပြာကြီး နည်းပညာနဲ့ဆက်သွယ်တယ်။ လူဆိုးကတော့ တသမတ်တည်းပြေးတယ်။ ရထားပေါ်ကိုထွက်ပြေးသွားတယ်။ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းကလည်းမခေဘူး ဆိုင်ကယ်နဲ့ရထားပေါ်ကိုခုန်ဆင်းတယ်။ ဘလက်ဒ်ဒီ ကြည့်ကောင်းတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ သံလမ်းပေါ် ကျသေသွားဖို့ရှိတာပေါ့။ မသေနိုင်သော ဂျိမ်းစ်ဘွန်းကတော့ လက်တစ်ဖက်နဲ့ရထားအမိုးကို ဖမ်းဆွဲထားလိုက်တော့ မသေဘူး။ ရထားမီသွားတယ်။
ရထားပေါ်မှာ ပစ်တယ်။ခတ်တယ်။ ယုတ္တိရှိတဲ့ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းကားမှာပဲတွေ့ရတဲ့ သေနတ်ကျည်ကုန်သွားတဲ့အခန်းပါတယ်။ တော်ရုံ အင်းဂလိပ်ကားမှာ မင်းသားသေနတ်ကျည်ကုန်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းကတော့ အေးဆေးပဲ။ ရထားပေါ်မှာ သယ်လာတဲ့ ဘက်ခ်ဟိုး(နောက်ပေါက်ကြီးလို့တော့ဘာသာမပြန်ကြပါနဲ့။ မြေတူးတဲ့ကားကြီးလောက်ပဲထားလိုက်ရင်ကောင်းမယ်။) ပေါ်တက်ပြီး လူဆိုးကို မြေကြီးတူးသလိုတူးဖို့ကြံတယ်။ လူဆိုးကပိုတော်တယ်။ လှမ်းပစ်လိုက်တာ တော်ရုံတန်ရုံ သေနတ်ထိခဲတဲ့ ထဆင်ထူးခုနစ်ရဲ့ ရင်ဘတ်ကို ထိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျည်တစ်တောင့်နဲ့တော့ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ဘက်ခ်ဟိုးကို ဆက်မောင်းပြီး မြေတူးသလို လုပ်တယ်။ လူဆိုးက ဂျိမ်းစ်ဘွန်း ကားပေါ်တက်ဆော့နေတဲ့ တွဲရဲ့ တွဲဆက်ကို သေနတ်နဲ့ပစ်ပြီးဖြတ်လိုက်တယ်။ တော်ရုံတန်ရုံနဲ့ တွဲဆက် သံတုံးကို ပြတ်အောင် သေနတ်နဲ့ပစ်လို့ ဘယ်ရပါ့မလဲ။ ဒါပေမယ့် သေနတ်က အထူးတီထွင်ဖန်တီးထားတဲ့သေနတ်ဖြစ်မှာပေါ့။
လူမည်းမလေးကတော့ ကားနဲ့ဘေးနားမှာလျှောက်မောင်းနေတယ်။ တွဲပြုတ်ခါနီးဖြစ်နေပြီလို့ ထဆင်ထူးခုနစ်ကို အကြောင်းကြားတယ်။ အဲဒီတော့ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းက ဘက်ခ်ဟိုးနဲ့ဟိုဘက်တွဲကို လှမ်းချိတ်ပြီး ဘက်ခ်ဟိုးစ်လက်တံကနေဟိုဘက်တွဲကိုကူးတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ဂျိမ်းစ်ဘွန်း ဟိုဘက်တွဲကိုအရောက်မှာ အရင်တွဲက ပြုတ်ကျန်ခဲ့ပြီ။ ဘလက်ဒ်ဒီ M ကနေ ဘယ်ရောက်နေပြီလဲသောက်ကောင်လေးဆိုတော့၊ တွဲပြောင်းနေပါတယ် ဒေါ်ဒေါ်လို့ပြန်ပြောတယ်။ အဲဒါလေးကို နားလည်တဲ့သူတစ်ချို့ရယ်ကြတယ်။ ma'am ဆိုတာ madam လို့အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ ဒေါ်ဒေါ်လို့ပြန်တာ သင့်လောက်တယ်။
လူဆိုးကတော့ ဂျိမ်းမပါတော့ဘူး ဟူးရေရေဟူးဆိုပြီး ပျော်နေတုန်း ဝုန်းကနဲ တွဲပေါ်ကို ခုန်တက်လာတဲ့ ဗျစ်တသျှ လိုင်စင်ရ လူသတ်သမားဂျိမ်းစ်ဘွန်းနဲ့တွေ့တယ်။ နပမ်းဖက်သတ်တယ်။ ကိုယ်ခံပညာတွေဘယ်လောက်တတ်တတ် နောက်ဆုံးတော့ နပမ်းပဲလုံးကြတာပဲ။ ဒါဟာ အင်မတန်မှ ယဉ်ကျေးတဲ့တိုက်ခိုက်နည်းပဲ။ မျက်နှာကို ထိုးဟယ် ကန်ဟယ်၊ ရှောင်ဟယ် တိမ်းဟယ်နဲ့။ ပြီးတော့ သံကြိုးနဲ့ရိုက်တယ်။ ရှောင်တယ်။ တိမ်းတယ်။ ရထားခေါင်မိုးပေါ်မှာ ဈေးလိုက်ရောင်းနေတဲ့ဈေးသည်ကို မမြင်ဖူးတဲ့လူတွေအတွက်တော့ ရင်တထိတ်ထိတ်ပဲ။ ရထားက အမိုးနိမ့်နိမ့်နဲ့တံတားလေးကိုဖြတ်တော့ နှစ်ယောက်သားပုဝပ်လိုက်ကြတာကလည်း အင်မတန်ရယ်စရာကောင်းသလိုကြည့်ကောင်းတယ်။
လူမည်းမလေးက သေနတ်ကိုထုတ်တယ်။ ချိန်တယ်။ M ကိုမေးတယ်။ မြင်ကွင်းကွယ်နေတယ်။ ဂျိမ်းစ်နဲ့ရှုပ်နေတယ်။ ဘာလုပ်ရမလဲ။ ပြောပြော။ ဂျီးဒေါ်ပြော။ ဒီဘက်ကနေထွက်လို့ ပဲခူးဘက်ရောက်သွားရင် ရိုးမကနေလွတ်သွားတော့မယ်။ ဘာလုပ်ရမလဲ။ ကျမဘာလုပ်ရမလဲ ရှင်ရယ်ဆိုပြီးပြောတယ်။ ဘလက်ဒီ shoot ပါဆိုမှ ... ပစ်ဟ သေနာမရဲ့ ဆိုပြီး M ကပစ်မိန့်ပေးတယ်။ ကုလားမလေးကလည်း သေချာချိန်ပြီး လူဆိုးကိုပစ်တယ်။
ဂျိမ်းစဘွန်းထိသွားတယ်။ အေးဂျင့်ကျသွားပြီ M၊ ကျမလက်ဖြောင့်တယ်နော် အဟင်းအဟင်း။ M ငိုင်တွေကျသွားတယ်။ ဒီလောက်ဆဲနေတာတောင် ဒီလောက် တောက်တုံးမကျတဲ့ဟာတွေလို့စိတ်ထဲမှာတွေးနေသလားမပြောတတ်တော့ပြီ။
ဂျိမ်းစ်ဘွန်း ရေထဲအကျမှာ အဒဲလ်က အသံလေးသာသာယာယာနဲ့ skyfall သီချင်းကိုဆိုတယ်။This is the end နဲ့အစချီတော့ တစ်ချို့လည်း ထပြန်သွားမလိုလုပ်တယ်။ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းလည်းသေပြီ။ သီချင်းကလည်း ဒါ ဇာတ်သိမ်းပဲဆိုတော့ ပြန်ရမယ်ထင်ကုန်တာ။ အဲဒါဇာတ်ဝင်သီချင်းခေါ်ရမယ်။ ဂရမ်မီတွေအများကြီးရထားတဲ့အသံဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့။ စာတန်းထိုးတွေကတော့ ရှေးယခင်ကို ဘယ်လိုမှ မမီတော့ဘူး။ ကမ္ဘာကြီးက မဆုတ်ယုတ်သင့်တဲ့နေရာတွေ ဆုတ်ယုတ်ကုန်ပြီ။ ဆုတ်ကပ်မှာ လူဖြစ်ရတာ မနိပ်လှ။
မြန်မာကားတွေထဲကလိုပဲ။ ထဆင်ထူး ခုနစ်က ကမ်းခြေရွာလေးမှာ အရက်သမားဖြစ်ပြီးပျော်နေတယ်။
မြို့ပေါ်မှာ ဒေါ်ဒေါ် အမ် အကြပ်ရိုက်နေရှာတယ်။ အထက်ကလည်း ဖိအားပေးတယ်။ M ခေါင်းကိုသုံးစမ်းပါ။ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ အလုပ်ထွက်ပါလို့ပြောတယ်။ အဲဒီလူကိုလည်း ဟယ်ရီပေါ့တားကြိုက်တဲ့သူတွေမှတ်မိမယ်။ လော့ဒ်ဗိုဒီမော့ထ်ကြီး အခုတော့ ခေတ်အဝတ်အစားနဲ့တောက်ပြောင်နေတယ်။
Gareth Mallory: Eleanor, be sensible. Retire with dignity...
M: Dignity! To Hell with dignity! I'll retire when my goddamn job is finally done.
သိက္ခာဟုတ်လား။ သောက်သိက္ခာနဲ့သွားသေလိုက်ပါလား (သောက်ပေါရဲ့)။ ငါရဲ့ သောက်လုပ်တွေပြီးရင် ငါ အနားယူမယ်။ (ငါ့ကိုဆှာလာမလုပ်နဲ့ သောက်ရူးလေး၊ ဆဲလွှတ်လိုက်မယ် မှတ်ထား)။
နောက်တော့ အမ်တို့ရုံးဗုံးခွဲခံရတယ်။ လူဆိုးက ခိုးသွားတဲ့ ဟာ့ဒ်ဒစ်ခ်ကို ဒီခရစ်ပ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ အကြမ်းဖျင်းပြောရရင်တော့ ဆရာဝန်ရေးထားတဲ့လက်ရေးမျိုးကို လက်ရေးပါရဂူက ဖတ်ဖို့ကြိုးစားသလိုမျိုးပဲ။ ဖတ်လို့ရသွားတော့ အေးဂျင့်တွေရဲ့ အကြောင်းတွေကို ဘလော့ခ်မှာတင်ပစ်တယ်။ အမ်တို့ရုံး ဗုံးခွဲခံရလို့ ဝန်ထမ်းတွေ တစ်အုပ်ကြီးသေသွားတာတွေ့တော့ ဂျော်နီ အင်းဂလစ်ခ်ျများထွက်လာမလားမျှော်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂျော်နီက တခြား အဆိုင်းမန့်တွေနဲ့ဒီကားမှာ ထွက်မလာဘူး။
သေပြီလို့ထင်ရတဲ့ ထဆင်းထူး ခုနစ် M ဆီကို ပြန်ရောက်လာတယ်။
James Bond: 007 reporting for duty.
James Bond: Enjoying death.
သုညသုညခွန် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အသင့်ပါ ဒေါ်ဒေါ်။
နောက်တော့ ထဆင်ထူး ခုနစ်ကို လေ့ကျင့်ပေးတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမေးခွန်းတွေမေးတယ်။ တစ်ခွန်းမေး၊တစ်ခွန်းဖြေ၊ ငြိဏ်းဝေလိုမျိုး၊ကိုငြိဏ်းဝေအထာတွေ လုပ်တယ်။
(ဘွန်း)။ ။ အလုပ်
(ဘွန်း)။ ။ ခွေးမကြီး။
အဲဒီနေရာမှာ ပိတ်သတ်တွေရယ်ကြတယ်။ အေးဂျင့်တွေလည်း ရယ်မလိုဖြစ်သွားတယ်။
သုညသုညခွန်ကို မစ်ရှင်တစ်ခုလွှတ်လိုက်တယ်။ လူဆိုးက ရှန့်ဟိုင်းရောက်နေတယ်။ လိုက်ဖမ်းစေဆိုပြီးတော့လွှတ်လိုက်တယ်။ အမှန်က ဂျိမ်းစ်ဘွန်းက လေ့ကျင့်ခန်းတွေရော၊ သေနတ်ပစ်တာမှာပါ မအောင်ဘူး။ ဘွားဒေါ်ကြီး M က တမင်လွှတ်လိုက်တာ။ ဂျိမ်းဘွန်းဆိုတာကလည်း စာတတ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ သူ့အခြေအနေသူကောင်းတယ်ထင်တာမျိုး။ ကော့ကော့ကော့ကော့ ဆိုတဲ့ ကော့၎ခါနဲ့ထွက်သွားတာပဲ။
အရင်ကားတွေမှာ အထူးအဆန်းထွင်ပေးတဲ့ Q ကိုမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ Q ကြီးသေသွားတော့ Q ပေါက်စလေးပါလာတယ်။ သေနတ်တစ်လက်ပေးတယ်။ မြန်မာပြည်က လက်ခဏာဆရာတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးလုပ်ထားတဲ့ လက်ခဏာဖတ်တတ်တဲ့သေနတ်ကိုပေးတယ်။ တခြားသူပစ်လို့မရဘူး။ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းတောင် လက်မှာ ဓားရှတာတို့ အရည်ခွံကွာတာတို့ဆိုရင်ပစ်လို့မရတဲ့သေနတ်။ အဲဒါကိုပေးတယ်။ ရေဒီယို ထရန်စမစ်တာတစ်ခုလည်းပေးတယ်။ အရင် Bond တွေကိုနောက်လိုက်သေးတယ်။ မင်းက ပေါက်ကွဲစေတဲ့ဖောင်တိန်လိုချင်သေးတာလားဆိုပြီး။ (Q က အရင်တုန်းကတော့ အင်ဂလန်က Richard II, အခုတော့ Q အဖြစ်သရုပ်ဆောင်တယ်။)
မြင်ကွင်းတွေ၊ရှူခင်းတွေသိပ်လှတယ်။ ဒါကို အရသာခံတတ်ရင် ဘွန်းမကောင်းတော့ဘူးဆိုပြီး ပြောကြမယ်မထင်ဘူး။ အရသာရှိတာတွေကို တန်အောင်ကြည့်သင့်တယ်။ ဘွန်းက ရှန့်ဟိုင်းလိုက်သွားပြီး လူဆိုးကိုဖမ်းတယ်။ တရုတ်တွေပေါတယ်ဆိုတာ ဘယ်ဟုတ်လို့တုံး။ ဘွန်းက တရုတ်ပြည်မှာ လူဆိုးကို တန်းတွေ့တာပဲ။
လူဆိုးက နောက်ထပ်လူဆိုးတစ်ယောက်ကိုလုပ်ကြံတယ်။ တကယ်တော့ လူဆိုးကလည်း စီအိုင်အေကအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းပဲ။ ဒါတွေကို စိတ်ဝင်စားသင့်တယ်။ ဘာကြောင့် စီအိုင်အေကလူက ဒီလိုဖြစ်သွားတာလဲ။ လူ့သဘာဝအဖွဲ့လေးတွေပဲ။ လူဆိုတာ အကောင်း အဆိုးရောနေတာလေးတွေကို သတိပြုသင့်တယ်။
လူဆိုးနဲ့ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းတို့ ထိုးတယ်၊ ဖိုက်တယ်။ တိုက်တယ်၊ ခိုက်တယ်။ ကန်တယ်၊ကြောက်တယ်။ မသိရင် ရာမနဲ့ ဒဿဂီရိ တပြိုင်နက်ကနေသလိုပဲ။ တိုက်ခိုက်နေတယ်ထောင်မထင်ရဘူး။ နောက်တော့ လူဆိုးက မိုးမျှော်တိုက်ပေါ်က ပြုတ်ကျခါနီးဖြစ်နေတယ်။ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းက မင်းကိုခိုင်းတာဘယ်သူလဲဆိုတော့ သတ်ချင်ရင်သတ်၊ ပြောပြဘူးဆိုပြီး ခုန်ချသွားတယ်။
တကယ်နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်နေတဲ့ သူက ဂျိမ်းဘွန်းရဲ့ နောင်တော်ကြီးပဲ။ တစ်ချိန်က MI ပေါ့။ နောက်တော့ သူလည်းဘဝပျက်သွားတယ်။ M ကို မုန်းသွားတယ်။ သူက computer စနစ်တွေကိုသိတော့ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းကိုနောက်တယ်။ မင်းကို သေအောင် လွှတ်လိုက်တာ။ မင်းအမေကတော့ မကောင်းဘူးဆိုပြီး နောက်တယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ mommy လို့ပြောတယ်။ မင်း ကိုငါ့နောက်လိုက်ခိုင်းလိုက်တာ တမင်လွှတ်လိုက်တာ။ မင်း သေချင်လည်း သေသွားမယ်ဆိုတာ သူသိတယ်။ မင်းအမေက အင်မတန်ဆိုးတယ်ကွာရ်။ လို့ ရာအူးလ်ဆေးလ်ဗားကပြောတယ်။ ရာအူးဆေးလ်ဗားဆိုတာ ဘော်လုံးသမားရာအူးလ်တို့ ဆေးလ်ဗားတို့ရဲ့သားမဟုတ်ဘူး။ ဂျိမ်းဘွန်းမတိုင်ခင်က ဘွန်းခဲ့တဲ့ စုံထောက်ဟောင်းကြီး။ သွားတွေလည်းကျိုးခဲ့တယ်။
Casino Royale က Mads Mikkelsen (LeChifre)ကိုမှတ်မိဦးမယ်ထင်ပါတယ်။ ကိုယ်တုံးလုံး ဘွန်းကို ကြိုးထုံးနဲ့ အဓိကနေရာကို ဆုံးမခဲ့တဲ့ လူဆိုးဟောင်းလေ။ ဘွန်းခမျာလည်း ထိုင်ခုံမှာကြိုးတုပ်ထားရင် ဒီအဖြစ်ဆိုးကြီးပြန်မြင်ပြီး ပိုကြက်သီးထသလားမဆိုနိုင်ဘူး။ တစ်သက်လုံးကြောက်မယ်ဆိုရင်လည်း ကြောက်သွားစရာပဲလေ။ ဒီလိုနှိပ်စက်နည်းမျိုးက ကြည့်ရတာတောင် ယောကျာ်းချင်းကိုယ်ချင်းစာပြီးသနားမိတယ်။
(နောက်ထပ်ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ ဘွန်းရဲ့ရန်သူတော်တွေထဲမှာ ရာအူးလ်ဟာ ပထမဆုံး ဂေးရန်သူဖြစ်သွားတာပါပဲ။ အင်မတန်အားကောင်းတဲ့ ဗီလိန်သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစပိန်သား သရုပ်ဆောင်ဟာ အော်စကာလည်းရထားတယ်လို့သိရပါတယ်။)
အဲဒီမှာ ဆေးလ်ဗား ပြောတဲ့ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်သိပ်ကောင်းတယ်။ အင်းဂလစ်ခ်ျလို နားမလည်တဲ့ ကျနော်တို့လို အူတူတူအတတတွေကတော့ ဘေးလူကြည့်ပြီးရယ်သံနားထောင်ပြီးရယ်ခဲ့ရတာပဲ။ ကြွက်တွေပေါလွန်းလို့ ဆေးလ်ဗားရဲ့ အဘွားက ကြွက်တွေဖမ်းပြီး လှောင်ထားတယ်။ ကြွက်တွေဟာ ဆေးလ်ဗားတို့ အဘွားရဲ့ ကျွန်းမှာတော့ အဓိကပြဿနာကောင်တွေပဲ။ အုန်းသီးတွေကို တက်တက်ဖောက်တယ်။ အဲဒါကို ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိတော့ ကြွက်တွေကိုဖမ်းပြီး အငတ်ထားလိုက်တယ်။ သိပ်ဗိုက်ဆာလာတဲ့အခါ ကြွက်တွေဟာ တစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင် ကိုက်ပြီး စားလာကြတယ်။ နောက်ဆုံးကျန်တဲ့အကောင်ကို ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီကြွက်ဟာ အုန်းသီးမစားတော့ဘူး။ ကြွက်တွေကိုပဲ လိုက်ဖမ်းစားတော့တယ်တဲ့။
နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ကြွက်ဆိုတာ ဇာတ်တူသားစားပြီး ပျက်စီးတဲ့ ဟင်္သာဇာတ်နဲ့နည်းနည်းများ ဆင်မလားမသိဘူး ဆေးလ်ဗားက အင်မတန် အပြောကောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်။ စကားသာ ဒိထက်များများပြောရရင် Dark Knight ထဲက ဂျိုကာထက်သာသွားဖို့ရှိတယ်။ အခုလည်း ဘွန်းကိုပြောနေတာ မင်းနဲ့ငါဟာ နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ကြွက်တွေပဲ။ ဘွားတော် M က နှစ်ကောင်ကိုက်ခိုင်းထားတာ။ နှစ်ကောင်စလုံးသေလည်း အေးတာပဲဆိုပြီး လုပ်နေတာလို့ သူကပြောတယ်။ အဲဒီအခန်းက အင်မတန်မှကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်။ ဒါဟာ mannerisms ကိုပြတဲ့အကွက်ကောင်းတစ်ခုပဲ။
ဘွန်းကလည်း ဟာသတစ်ခုပြောတယ်။ (ဟာသလို့ယူသော်ရ၏ဆိုတာမျိုးပဲ။) သူပြောတာကတော့ ဟာသအနက်သိပ်မထွက်သလိုဖြစ်တယ်။ ကျနော်ကတော့ ဟာသကို အရင်ပြောပြမယ်စိတ်ကူးတယ်။ အဲဒါမှ သူပြောတဲ့စကားကိုကြားရင် အဲဒီဟာသလေးနဲ့ဆက်စပ်တွေးနိုင်မယ်။ သူငယ်ချင်းသုံးယောက် ကားတိုက်ပြီး သေသွားကြတယ်။ အဲဒီမှာ ကောင်းကင်ဘုံရောက်တယ်။ စိန့်ပီတာဆိုတဲ့ ကောင်းကင်ဘုံက သော့ကိုင်ကြီးက မေးတယ်။ မောင်မင်းတို့ တစ်ယောက်စီ ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေးတွေပြောပါဆိုတော့ တစ်ယောက်က သူဟာ ကျောင်းဆရာပါ၊ ကလေးတွေကျနော့်ကို စေတနာဆရာတစ်ယောက်အဖြစ် အမှတ်ရနေစေချင်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်။ စိန့်ပီတာကတန်ခိုးနဲ့ပြည့်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ နောက်တစ်ယောက်ကဆရာဝန်ဆိုတော့ သူ့နာမည်ကောင်းလေး သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အမြဲကျန်ရစ်နေပါစေဆိုပြီး ပြောတယ်။ အဲဒီတော့လည်း ပြည့်စေဆိုပြီးလုပ်ပေးလိုက်တယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ လူလည်။ သူပြောတာက ဝိုင်းအုံကြည့်နေတဲ့လူတွေက ဒီလူပြန်ရှင်လာပြီဟေ့လို့ ပြောတာကြားပါရစေတဲ့။
ဘွန်းကလည်းပြောတယ်။ လူတိုင်းမှာ ဝါသနာတစ်မျိုးစီရှိတယ်။
ဆေးလ်ဗားကမေးတယ်။ မင်းဝါသနာက ဘာလဲ။
ဘွန်းကဖြေတယ်။ ငါ့ဝါသနာက ပြန်ရှင်ချင်တာ။
ဒီနေရာမှာဘွန်းပြောချင်တာက အခု သူက သေလူဖြစ်နေပြီ။ ဆေးလ်ဗားက ဂျော်တကီးဆိုတော့ ဘယ်လို နှိပ်စက်လိုက်မယ်၊သတ်လိုက်မယ်မဆိုနိုင်ဘူး။ အဲဒီတော့ သူပြန်ရှင်ရတာကို ဝါသနာပါတယ်လို့အရွှန်းဖောက်လိုက်တာပဲ။ ဒါကို နားမလည်ကြတဲ့သူများတော့ မရယ်ကြဘူး။ အဲဒီတော့ ကျနော်လည်း မရယ်လိုက်ဘူး။
Resurrections ကို Jesus သေပြီး ပြန်ရှင်လာတာမျိုးမှာသုံးပါတယ်။ ခရစ်ယာန်တွေကတော့ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းလို့ ဘာသာပြန်တယ်။ ယုဒသန်ရဲ့ လှပတဲ့ဘာသာပြန်တစ်ခုပါပဲ။ ဒီနေရာမှာ ဘွန်းက Resurrections ကို ဝါသနာပါတယ်လို့ပြောလိုက်တာ အင်မတန်ချက်ကျလက်ကျရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ကောင်မလေးခေါင်းပေါ်က ခွက်ကို သေနတ်နဲ့ပစ်တာလည်း အင်မတန်သပ်ရပ်တဲ့အကွက်ပါပဲ။ ဗီလိန်ကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အထာတွေကို ဆေးလ်ဗားမှာ အပြည့်တွေ့ရတယ်။ နောက်တော့ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းမှာပါလာတဲ့ ရေဒီယိုထရန်စမစ်တာအရ အဖွဲ့ချုပ်က ဟယ်လီကော့ပ်တာ သုံးစီးရောက်လာတယ်။ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းကလည်း ဆေးလ်ဗားကို ဖမ်းလိုက်နိုင်တယ်။
တကယ်တော့ ဆေးလ်ဗားက တရုတ်တွေနှိပ်စက်လို့ သွပ်သွားရှာတာ။ မစ်ရှင်တစ်ခုမှာ တရုတ်ပြည်ကို သွား hack (ဟက်ခ်)ခိုင်းတာ မိသွားရှာတယ်။ အမ်တို့က ထားခဲ့လိုက်တာ။ သူကလည်း ထိပ်သီးအေးဂျင့်ဆိုတော့ M တို့ သွားအောက်မှာ လျှို့ဝှက် ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ဆိုင်ယမ်နိုက်အဆိပ်ကို သွားချိုးပြီး ကိုက်လိုက်တာ၊ အဆိပ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီမှာ တရုတ်တွေရိုက်၊ ဖားပြုတ်တွေကိုက်ပြီး၊ သွားတွေကျိုး၊ ဦးခေါင်းခွံအက်နဲ့ လူလည်း သွပ်ထွက်သွားတယ်။ သူ M ကို မုန်းတာဘာဆန်းလဲ။ သူက အခု Bond လို ခပ်တုံးတုံးမဟုတ်ဘူး။ အရည်အချင်းအများကြီးပိုရှိတယ်။ ဖောက်ခွဲရေးတွေလည်းကျွမ်းသလို၊ Hacking မှာလည်း ဆရာတစ်ဆူပဲ။ သူ့ ကို ဖန်လှောင်အိမ်ထဲမှာဖမ်းထားပြီး။ သူ့ကွန်ပြူတာကို ဒီခရစ်ပ်လုပ်တယ်။
အဲဒီမှာ ဆေးလ်ဗားဆင်ထားတဲ့အကွက်က အင်မတန်မှလှတယ်။ သူ့စက်ကို ဒီခရစ်ပ်လုပ်လိုက်တာနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ထွက်လာပြီး လုံခြုံရေးစနစ်တွေကို ကြောင်သွားအောင်လုပ်ထားတယ်။ အဲဒီလို လုံခြုံရေးစနစ်တွေကြောင်သွားတဲ့အချိန်မှာ သူထွက်ပြေးသွားတယ်။ အင်မတန်မှတော်တယ်။ ဘွန်းလိုက်ရှာတယ်။ မမီဘူး။ ရဲသားယောင်ဆောင်ပြီး ပြေးတယ်။ သူ့တပည့်တွေကလည်း နေရာအနှံ့မှာရှိတယ်။
အရင်ကားတွေမှာ မပါတဲ့ဟာသကွက်လေးတွေပါတယ်။ Q က ဒီတစ်ခါ သိပ်ရယ်ရတယ်။ ရထားဘူတာမှာ ဆေးလ်ဗားကိုရှာခိုင်းတာ ဘွန်းကိုတွေ့တာနဲ့ ငါမင်းကိုတွေ့ပြီကွ လုပ်နေတာ။ နောက်တော့ ဆေးလ်ဗားက ရထားပေါ်တက်တယ်။ ယူနီဖောင်းနဲ့ဆိုတော့ Q က ကင်မရာထဲကနေကြည့်ပေမယ့် မမှတ်မိဘူး။ ဘွန်းက ရထားပေါ်တက်သွားရမလား၊ ကျန်နေခဲ့ရမလားမေးတယ်။ ရထားကထွက်သွားမှ Q က အေး ရထားပေါ်တက်ဆိုတော့ ဘွန်းတစ်ယောက် ရထားနောက်ကို ပြေးလိုက်ပြီး ခုန်တက်ရတယ်။ ဘူတာရုံက လူကြီးက ဒီကောင် အိမ်အတော်ပြန်ချင်နေပုံရတယ် လို့ပြောတဲ့အခန်း အူတက်အောင်ရယ်ရတယ်။ တော်တော်များများလည်းရယ်ကြလို့ ကျနော်လည်း ရယ်လိုက်တယ်။
ဆေးလ်ဗားဖောက်ခွဲတဲ့အကွက်တွေသိပ်မိုက်တယ်။ ဘွန်းရထားတိုက်ခံရပြီး သေမလိုတောင်ဖြစ်တယ်။ ဆေးလ်ဗားဘယ်ကိုသွားနေတာလဲဆိုတာကို ဘွန်းတို့ ခန့်မှန်းကြတယ်။
တကယ်တော့ ဆေးလ်ဗားက M ကို သတ်ဖို့ လိုက်နေတာ။ M က တရားရုံးမှာဖြေရှင်းနေရတယ်။ ဆေးလ်ဗားက သူခိုးထားတဲ့ ဟာ့ဒ်ဒစ်ခ်ထဲက အထုပ်ရှုပ်တွေကို ဘလော့ခ်တွေ၊ ဝဘ်တွေမှာ လွှင့်ထားတော့ပြဿနာတက်နေတယ်။ အဲဒီမှာ ပန်ပန်(ပန်ဒိုရာ)တို့၊ ဒါဒါ(အိန်ဒါ)တို့ကို အားကျတဲ့ M ကလည်း ကဗျာရွတ်သဗျ။ လော့ဒ် အဲဖရက် တက်နဆင်ရဲ့ ယူလီဆီးကဗျာထဲက ပါဒတစ်ချို့ကို ရွတ်သဗျ။
"Though much is taken, much abides; and though
ငါတို့ဟာ အရင်လို ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကို ရွှေ့နိုင်လောက်တဲ့ ခွန်အားတွေမရှိတော့ပေမယ့်
ငါတို့ဟာ ငါတို့ပဲ ဆိုတာတော့ကျန်သေးတယ်။
အချိန်နဲ့ကြမ္မာကြောင့် အားနည်း မှေးမှိန်သွားပေမယ့်
တူညီစွာ ထုလုပ်ပုံသွင်းထားတဲ့ သူရဲကောင်းနှလုံးသားတွေက
ချေမှုန်း၊ ရှာဖွေ၊ လမ်းပြဖို့ပဲ၊ လက်လျှော့လိုက်ဖို့ မဟုတ်ဘူး …………..။
ရဲရဲတောက် ကဗျာရွတ်နေတဲ့ M ကို ဆေးလ်ဗားက ရုံးတော်ထဲ ဝင်ပြီး ပစ်သတ်တော့ M ဘာလုပ်တယ်မှတ်သလဲ။ ပုန်းနေတာပေါ့။ ကဗျာက ကဗျာပဲ။
ဗော်ဒီမော့ခင်မျာလည်း မှော်ကြိမ်လုံးမပါတော့ ဒိုင်းညှောင့် ဒိုင်းညှောင့်လုပ်ရတာပဲ။ နောက်တော့ ဘွန်းရောက်လာပြီး ဆေးလ်ဗားကို လိုက်ပစ်တယ်။ ဆေးလ်ဗား လစ်သွားတယ်။ ဘွန်းက M ကိုခေါ်ပြီးထွက်ပြေးတယ်။ ဒီတစ်ခေါက် Bond Gal က M ဆိုပြီး9Gag ကတောင် လှောင်တယ်။ Bond ရဲ့ ဇာတိချက်ကြွေ skyfall ခြံဝင်းကြီးဆီကိုသွားတယ်။ အထိန်းတော်ကြီးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူ့နာမည်ကင်ကိတ်ဒ်။ သူကလည်း မထင်မှတ်ပဲ အမှတ်တရဖြစ်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ အရင်က Jason Bourne ကားမှာပါတဲ့လူကြီးပါ။ ဘွန်းက အမဲလိုက်သေနတ်ကိုင်တာ ဟန်မကျလို့ပြောနေတုန်း၊ ဘွန်းက ဒိုင်းဒိုင်းဆိုပြီး နှစ်ချက်ပစ်တာ နှစ်ချက်စလုံးပစ်မှတ်ကိုတည့်တော့ သူက မင်းငါ့ကို အရင်ကပြောတော့ ဘာလုပ်စားတယ်ဆိုလားဆိုပြီးပြောတာ သိပ်ရယ်ရတယ်။ အရင်က ဘာလုပ်စားတယ်ပြောထားမှန်းမသိတာကိုက ဟာသမြောက်တယ်။ အခုတော့ လက်ယဉ်လိုက်တာဆိုတဲ့သဘောပဲ။
နောက်တစ်ခန်းက ကင်ကိတ်ဒ် ရယ်ဒီဖြစ်ပြီလားလို့ ဘွန်းက မေးတော့ သူက ကောင်လေး၊ မင်းမမွေးခင်ကတည်းက ငါက ရယ်ဒီဖြစ်နေတာ လို့ပြောတာ သိပ်သဘောကျတယ်။ တော်တော်များများလည်း ဒီအခန်းကို ရယ်ကြတယ်။
အင်မတန်မှ ကြည့်ပျော်ရှူပျော်ရှိပြီး ရှည်လျားလှတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါပဲ။ ဇတ်ကားရှည်လေ တန်လေဆိုပြီး ခံစားရတဲ့သူတွေ ကြည့်ကို ကြည့်သင့်တဲ့ကားတစ်ကားပါပဲ။ သန်း ၁၅၀ ၊ သန်း ၂၀၀ လောက်သုံးပြီး ရိုက်ထားတဲ့ကားကို ၁၁ SGD လောက်နဲ့ကြည့်ရတာ အင်မတန်တန်ပေတာပဲလို့ ခံစားရပါတယ်။
ဇာတ်သိမ်းခန်းကို ကျနော်မရေးတော့ပါဘူး။ အခုတောင် အတော်လေး ရှည်လျားနေပြီထင်ပါရဲ့။ ပျော်စရာကောင်းပြီး၊ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းက ဂျိမ်းစ်ဘွန်းသိပ်မဆန်တဲ့ ကားကောင်းတစ်ကားပါပဲလို့ ပြောရင်း ဇာတ်သိမ်းလိုက်ပါရစေ။
ပြောစရာတစ်ခုကျန်ပါတယ်။ မီးမီးချောရဲ့ပန်းချီကားကို ၂၃ ရက်နေ့အထိ တစ်နေ့တစ်ကြိမ် vote လို့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ rules ကို မသိတဲ့အတွက် အရင်နေ့က ပို့စ်မှာ မပြောမိလိုက်ပါဘူး။
ကိုသွားပြီး vote နိုင်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်သော နေ့ရက်ဖြစ်ပါစေ။
Peace B with U.
Labels: 007, 2012 movie, James Bond, movie review, skyfall
Quotes in mind
“Creativity is to think more efficiently”
“I need so much time for doing nothing that I have no time for work.”